१ दिनको लागि सकारात्मक सोचले तपाईंको आत्मसम्मान बढाउन सक्छ - व्यक्तिगत विकास क्याफे
दिनको लागि १ सकारात्मक सोच तपाईंको आत्मसम्मानलाई सुधार गर्न सक्छ
पोस्ट व्यवस्थापक | फरवरी 16, 2020 | व्यक्तिगत विकास, सकारात्मक सोच |0|
यदि तपाईं आकर्षणको कानूनमा विश्वास गर्नुहुन्छ वा माइंडफुलनिसको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले सायद एक सकारात्मक चिन्ताको साथ दिनको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ।
वास्तवमै लोकप्रिय प्रेरक उद्धरण भन्छ, "बिहानको एउटा सकारात्मक विचारले तपाईको सम्पूर्ण दिनलाई बदल्न सक्छ।"
सकारात्मक सोच दिनका लागि - मुस्कुराउनुहोस्
बेइजि inमा million ० लाख साइकल छन्? पृथ्वीमा on अरब मानिस छन्? कहिलेकाँही यो पूरै समीकरणमा एक कालो हुन बेकार छ। दिनको लागी कसैले पनि तपाईको सकारात्मक सोच दिन सक्दैन।
यदि तपाई आफ्ना आँखाहरू बन्द भएको देख्न चाहानु भएको जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ भने, जब तपाईले त्यसलाई खोल्नुहुन्छ यो वास्तविकतामा किन पर्दैन? जीवन पन्च पछि पंच फ्याँक्छ, तर, तपाईंलाई थाहा छ मुहम्मद अली के भन्छन्? "रिंगमा, वा जीवनमा, तल झर्दा कुनै समस्या हुँदैन, समस्या रहिरहन्छ।"
यदि तपाइँलाई आवश्यक छ सकारात्मक सोच दिनको लागि, टाढा नहेर्नुहोस्, भित्र हेर्नुहोस्। तपाईंसँग पहिले नै यो छ। स्वीकृति भनेको हामी सबैले खोज्ने कुरा हो। यो अहंकार हो। धेरै समय अघि तपाईले आफैंलाई चम्काउनुभयो र तपाईलाई यो थाहा छ
दिनको लागि तपाईंको सकारात्मक सोच तपाईं हुनु पर्छ! तपाईको 'चक्र' मा जान वा कुनै अन्य ड्राइभिंग स्रोतमा जानु आवश्यक पर्दैन, तपाईं ओमेगा नै प्राकृतिक हुनुहुन्छ।
समय नै पैसा हो? तपाईं कति समय हाँस्न नसक्ने बारेमा सोच्नुहोस्। के तपाईंलाई थाहा छ, तथ्य कुरा, यो मुस्कान भन्दा फ्रोन गर्न अधिक मांसपेशीहरू लिन्छ? दिनको लागि एक सकारात्मक सोच जुन तपाईंले जहिले पनि कुनै अवसरको लागि आफूसँगै लैजानुपर्छ, मुस्कुराउनु हो। यसले ढोका खोल्यो जुन अरू केहि पनि छैन।
1. यो तपाइँको लागि आउन पर्खनुहोस् - धेरै धेरै हराइरहेका छन् उनीहरूको सोचमा छ कि यो केहि गरी यो तिनीहरुको अनुहारमा हिर्काउनेछ। सत्य यो हो कि तपाईले आफैंलाई अनुहारमा हिर्काउनको लागि बाटोमा राख्नु पर्छ। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्न कि यो एक राम्रो दिन हुन गइरहेको छ भने यो राम्रो दिन हुनेछैन। यदि तपाईं उठ्नुभयो भने यो राम्रो दिन हुन गइरहेको छ तर केहि नकारात्मकले तपाईंलाई हिर्काउँदछ तपाईंको अनुहारमा चुर्लुम्मै डुबाउँछ, यसलाई एक पछि अर्को दिशामा लिनुहोस् र यसलाई अलग गर्नुहोस्।
2. बल - गान्धीले यो कसरी बनायो? कसैले पनि कहिले भन्न सक्दैन कि तपाईं जुन स through्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अल्प हो, तर तपाईं बलियो हुनुपर्दछ। तपाईंको विरुद्ध बोल्ने व्यक्तिहरूको लागि, तिनीहरूले भर्खरै तपाईलाई प्रमाणित गर्छन् कि तपाई कति राम्रो गरिरहनु भएको छ। तपाईं कति टाढा जान सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई देखाउनुहोस्।
3. प्रत्येक पतनबाट सिक्नुहोस् - मानव जस्तोसुकै हामी पनि हामी कुनै गल्ती र पतनबाट मुक्त छैनौं र यसैले हामीले यसबाट पाठ सिक्नुपर्दछ। जीवनका सर्वश्रेष्ठ शिक्षकहरू हाम्रा गल्तीहरू हुन् र ती कठोर हुन सक्छन्, तिनीहरूले हामीलाई तिखार्छन् र हामी को हौं भनेर बनाउँछन्।
4. हाम्रो जीवन हाम्रो विचारहरूले यसलाई बनाउँछ। सोचाईले कार्यलाई निम्त्याउँछ र फलस्वरूप सकारात्मक विचारहरूले सकारात्मक कार्यहरू निम्त्याउँदछन् जसले जीवनमा सफलता र खुशीको लागि नेतृत्व गर्दछ। जब तपाईं तल जानुहुन्छ तपाईं मात्र जाने बाटो माथि छ।
तपाईं आफ्नो जीवनको एकमात्र मूर्तिकार हुनुहुन्छ र तपाईं पैसा कसैलाई दिन सक्नुहुन्न। यो अधिक उत्पादक हुनेछ यदि, सयौ दयाको साटोमा डुब्नुको सट्टा, तपाईं आफैंलाई केही सकारात्मक विचारहरू र सकारात्मक कार्यहरू गरेर प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। यदि त्यहाँ बहिराले सुन्ने भाषा छ भने, यो मुस्कान हुनुपर्दछ।
विजय सकारात्मक सोचको हो। तपाईंको सोच बदल्नुहोस् र तपाईंले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नुभयो। सकारात्मक विचारहरूमा चुम्बकीय शक्ति हुन्छ। हामी आफैंमा आकर्षित गर्छौं जुन हामी निरन्तर सोचिरहेका छौं। किन केवल सकारात्मक विचारहरू सोच्दै राम्रो घटनाहरू आकर्षित गर्ने?
दिन को लागी सकरात्मक सोच राख्नको लागि; यो अत्यावश्यक छ कि तपाइँको मनोवृत्ति खुशीको हुनुपर्छ। शंका र चिन्ताका सबै नकारात्मक विचारहरू फेर्नुहोस्। तपाईंको विन्डोज र दैलोहरू तिनीहरूको विरुद्धमा बन्द गर्नुहोस्।
यो सफलता र खुशी प्राप्त गर्न को लागी आवश्यक छ सकारात्मक विचारहरु संग आफ्नो दिन सुरु र अन्त। कुनै पनी सकारात्मक पढाइ वा सुन्न सफलताको लगानी हुन्छ। सकारात्मक मनोवृत्तिले तपाईंको आत्मालाई माथि उठाउन सक्छ; आँखामा झिम्काउनुहोस् र ओठमा मुस्कान दिनुहोस्।
यदि यस लेखले तपाईंलाई आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न प्रेरित गरेको छ; त्यसोभए 3o दिनको ई-बुकमा तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस् खरीद गर्नुहोस् तपाईले लिनुहुने उत्तम निर्णयहरू मध्ये एक हुन सक्छ।
तपाईं धेरै पाउन सक्नुहुन्छ प्रेरणादायक उद्धरण र भनाइहरू तपाइँलाई यहाँ निजी विकास क्याफेमा प्रेरित गर्न।
यदि तपाइँसँग मनपर्ने छ भने कृपया तल हाम्रो टिप्पणी फारम प्रयोग गर्नुहोस् व्यक्तिगत विकास उद्धरण कि तपाई अरुसंग बाड्न चाहानुहुन्छ।
यदि तपाईंसँग कुनै सल्लाह, सुझावहरू तपाईं अरूहरूसँग साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने, प्रश्नहरू जुन तपाईं उत्तर दिन चाहानुहुन्छ वा टिप्पणीहरू जुन तपाईं बनाउन चाहानुहुन्छ - केवल हाम्रो प्रश्न र उत्तर फारम प्रयोग गर्नुहोस् तल एउटा विषय पोस्ट गर्न वा जवाफ दिन।
पछिल्लोजीवन कोचिंग सल्लाहहरू - सफलताको लागि आफूलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्
अर्कोमोरिंगाका Major प्रमुख स्वास्थ्य लाभहरू
महान प्रेरणादायक जिम रोहन आत्म-सुधारमा उद्धरणहरू
व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइ
१ self मिनेटमा तपाईको आत्मविश्वास कसरी सुधार गर्ने